China Zonke uthotho machining ukwenziwa nokwenziwa kwemveliso | UKUKHULA-Elec
Material: Cr12 45 # intsimbi
Iqhubekekisa izixhobo: ucingo ukusika, ngqo lathe processing
Imfuneko yokuchaneka: 0.01mm Imfuneko yokufana kweGiya: 0.02mm
Unyango Surface: mnyama, unyango kwinqanaba eliphezulu, unyango lwepolitiki
Uyilo loyilo: i-datum esetyenziselwa ukumisela indawo yamanye amanqaku, imigca kunye neeplani kumzobo wenxalenye kuthiwa uyilo loyilo.
Inkqubo yebenchmark: ibhentshi esetyenzisiweyo kulungiso nakwindibano yamalungu ibizwa ngokuba yi-benchmark yenkqubo. Inkqubo yedatum inokwahlulwahlulwa yindibano yedatha, imilinganiselo yedatha kunye nokubekwa kwedatum ngokweenjongo ezahlukeneyo.
(1) Idatha yeNdibano: isiseko esisetyenziselwa ukumisela indawo yamalungu ezinto okanye iimveliso ngexesha lendibano, ebizwa ngokuba yindibano.
(2) Ukulinganisa i-datum: i-datum esetyenziselwa ukukhangela ubungakanani kunye nendawo yokuma komhlaba obizwa ngokuba ngumlinganiso wedatha.
(3) Ukubeka indawo: isiseko esisetyenziselwa ukubekwa kwindawo yokusebenza ngexesha lomatshini, ekuthiwa kukubekwa endaweni yedatum. Ngokubhekisele kumphezulu (okanye umgca okanye indawo) njengendawo ekubhekiswa kuyo, kuphela indawo eluhlaza engenanto enokuthi ikhethwe kwinkqubo yokuqala, ebizwa ngokuba sisalathiso esirhabaxa. Kwinkqubo nganye elandelayo, umphezulu womatshini unokusetyenziswa njengesalathiso sokubekwa, esibizwa ngokuba sisalathiso esihle 
Egqithileyo Inkonzo yokumisa enye yokubopha
Okulandelayo: Lonke uthotho lokunyathela isinyithi
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Iimveliso zeSitayile seSinyithi, Izikrufu, Izahlulo Ihowuliseyili, Ukulahlwa kweMagnesium, Plate Intwasahlobo, Aluminium Cnc ngomshini Iintetho, Zonke iiMveliso